10 NOOCYADA UGU CAANSAN EE TARRAGON (SHARAXAAD IYO SAWIR GEEDO TARRAGON AH) - SOOSAARKA DALAGGA
Qoyska saaxiibka ah ayaa wakiil ka ah uruurinta guryaha ee beeritaanka ubax iyo beeraley ah oo dhirta sare leh oo cagaaran. tarragon (tarragon), ubaxu u dhexeeyay bilaha 8aad-9aad, caleemaha cagaarka (inta badan) ubaxa. Waxay u dhacdaa inay noqoto mid caan ah oo aan ur u lahayn.
Aztec waxay ku qasban tahay inay magaceeda asal ahaan ka soo jeeda dalka Mexico. Xoogaa iyo caleemo adag. Carafka qaro weyn ee dhirta ayaa leh midab madow. Inta badan, dhirta waxaa loo isticmaalaa sidii dhir daaweyn ah. Bushku wuxuu kor u kacay 1.5 mitir. Kordhay hal meel ilaa 7 sano.
Cirifka cad ee Estragon Valkovsky wuxuu leeyahay caraf udgoon. Tani waa noocyo qabow u adkaysta tarragon tarbiyada Ruushka. Waa wax aan qabyo ahayn oo aan la mari karin cudurada. Midabyo yaryar oo yaryar ayaa leh saliid muhiim ah oo loo isticmaalo karinta iyo cadarka. Laga soo bilaabo biqilka si ay u dillaacaan May - 2 bilood.
Waa muhiim! Ha u dulqaadanin qoyaanka xad-dhaafka ah.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan caleenta tarragon. Heerka mitir, waxaa lagu gartaa qadar ballaaran oo cagaaran - in ka badan 0.5 kg sanadka labaad ee xilliga sii kordhaya. Urka dhalaalaya wuxuu leeyahay dhadhan qadhaadh. Caleemaha xayawaankani waxay kuxiran yihiin pickles iyo cuntooyin kala duwan. Waxaa loo qasi karaa labadaba dhul furan iyo dheriga daaqadaha.
Tarragon Gribovsky wuxuu ku guuleystay inuu caan ku yahay bacdamaa uu ka soo horjeesanayo barafka iyo muddada koritaanka ee hal meel (ilaa 15 sano). Caleemo fiiqan oo dheer oo ku saabsan warshad dherer sare ah waxay u adeegtaa sida asalka mugdiga ah ee cagaarka cagaarka ah. Isticmaal - fasalka dhammaan fasalada dhirta quruxda leh - xawaashka salad, pickles, hilibka iyo suxuunta kalluunka.
Heerka mitir ee caadiga ah ee Estragon Dobrynya waxaa lagu daraa waxyaabo aan caadi ahayn oo ka mid ah walxaha waxtar leh - ascorbic acid, carotene, vitamiin iyo xubno raad. Tani geedaha basbaaska leh waxay muujinaysaa dhamaan faa'iidooyinka tarragonka. Wuxuu dareemaa wanaag wanaagsan abaarta, ha ka cabsanin hargabka. Awood 10 sano si ay u koraan isla meesha.
Ma taqaanaa? Tarragon waa in la dhalaaliyaa marka ay duurka u kala qaybsanaanayaan 3 sano kasta.
Buundada u dhaxeysa baraf udgoon ee cufan leh cagaar cagaaran. Waxay leedahay ubax yaryar oo huruud ah oo isku dhafan. Mudo 7 sano ah, waxay ku koreysaa hal meel illaa 150 cm Caanaha ku jira isticmaalka dabiiciga macaanku waxay ku habboon yihiin dubista, samaynta cabitaannada fudud.
Ma taqaanaa? Cawska duufaanka ee cidhib-tirka ee qaybta hoose ayaa lumisa caleenta hore.
Wuxuu ku jiraa xilliga xagaaga. Heerka baadiyaha (illaa 1.5 m) waxay la mid tahay Tarhun Monarch iyo noocyo kaleba. Sida Estragon Aztec, arooska aniseed ayaa ka adkaata ur xooggan. Caleenta wuxuu ka kooban yahay walxo ka caawiya alaabooyinka laga goosto guriga si ay u ilaaliyaan midabka, kor u kaca, u uraan una dhadhamiyaan. Waxay ka caawisaa in lagu daaweeyo cuduro badan.
Waa muhiim! Sannaddii kowaad ee horumarinta dhirta, beergooyska ayaa la sameeyaa mar - ka hor inta ubax.
In baadiyaha qumman (laga bilaabo 0.8 ilaa 1.5 m) tiro badan oo afkoda. Caleemaha Tarragon waa mid cidhiidhi ah, midabka dhalaalaya oo dhalaalaya, waxay qaadataa sanadka oo dhan (laga bilaabo guga ilaa guga) si ay uga beeraan geedo si ay u beerto meel joogto ah. Cagaarka cusub ee Estragon Monarch ayaa si gaar ah ugu wanaagsan saladhka.
Dhadhanka basbeelka ah ee dhirta ee noocyada kala duwan waxay door bidaan in ay isticmaalaan cabitaanka iyo pickles. Waxaa jira sifooyin daaweyn: tarragon waxay hagaajineysaa shaqeynta caloosha, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada, waxay yareysaa geedi socodka bararka. Iyadoo caawimaadda tarragon, cudurada neefsashada - oof-wareenka, tiibishada, boronkiitada - ayaa lagu daaweeyaa.
Prefers waxay u furan tahay meelaha bannaan. Dhiciddu waxay kacsan tahay, dhererkoodu wuxuu ku jiraa 80 cm, caleenta cufan wuxuu noqdaa mid adag oo bilawga ubaxa. Panicts of narrowings of inflorescences waxaa la sameeyey by dambiilood oo qaab ah kubadaha, halkaas oo ubax huruud ah la ururiyo. Salting, Canning iyo Cunto karinta isticmaalaan caleemaha iyo caleemaha yar yar ee Tarhuna Smaragd. Sidoo kale tarragon of noocyo this waxaa loo isticmaalaa by growers ubax for beerto madaxtooyada.
On 1.5-mitir-sare afkoda Tarhuna ee Faransiiska, cagaar mugdi ah caleemaha dhoobo iyo caddeyn ah ee ubax yar yar si fiican u kala duwan. Ku adkeysi qabow iyo cudur. Waxaa si fiican loo yaqaan in la kariyo sida wax lagu daro suxuunta ugu muhiimsan. Nidaamka casriga casriga ah noocyada kala duwan ee tarragon waxaa badanaa loo isticmaalaa beeritaanka kali ah.
Noocyada tarragonka ma aha mid aad uga duwan beerashada iyo daryeelka. Abigalinta by abuurka, shanks iyo kala qaybinta geedka a kala duwan. Marka beeritaanka, ballaadhka u dhaxeeya safka waa 0.7m, masaafada u dhexaysa dhirta waa 40 ilaa 70 cm Cagaarshow iyo Bacriminta digirta ayaa loo isticmaalaa dharka ugu sarreeya. Qiimaha waxaa lagu beeray 3-4 jeer, cawsduna waa laba jeer.